Baashe M. Faarax Oo Diiddan In La Dhexdhexaadiyo Talyanle
Hargeysa (Dhamays) – Guddiga Abwaannada Somaliland, oo Maalmihii u dambeeyay waday dedaal ay doonayeen inay ku dhex-dhexaadiyaan Garabyada Golaha Wakiillada ee uu ka dhexeeyo Khilaafka ku saabsan Guddoomiye-nimada Golaha Wakiilada, ayaa sheegay in dhinaca uu hoggaamiyo Baashe Maxamed Faarax ay u qabsoomi waayeen.
Afhayeenka Guddiga Abwaannada Somaliland Maxamed Xasan Cali (Weji) oo ka hadlayey Shir-jaraa’id oo Guddigu ku qabatay Hargeysa Maanta ayaa sheegay in Dhinaca Cabdiraxmaan Talyanle u qabsoomeen oo ay diyaar u yihiin in khilaafka la xalliyo, laakiin Garabka Baashe diideen inay u qabsoomaan Abwaannada.
“Labada Guddi ee loo saaray Xallinta Khilaafka Golaha Wakiilladu illaa hadda may kulmin, markaa waxaanu isku daynay inaanu isku keeno. Labada dhinac waxa noo qabsoomay Dhinac oo diyaar noo ahaa, laakiin Dhinicii kale ayaanu u taag-weynay oo na diiday, Maantana waxa noo sii raacay Dhinacii na diidanaa oo ah Dhinaca Baashe in isaga laftiisii uu na yidhaahdo, haddaad Odayaashii tihiin Raali naga ahaada.” Ayuu yidhi Maxamed Xasan Cali (Weji), waxaanu intaa ku daray “Inkasta oo taasi naga raacday, haddana waxaanu leenahay Arrinta hoos u dhiga oo Qabow ku daya.”
Halkan Hoose ka Daawo Hadallada Abwaannada
Previous: Guddiga Doorashooyin Somaliland Oo Shir Gaar Ah La Yeeshay Wefti Ka Socda Waddanka Ingiriiska
Next: DEKEDDA BERBERA:Laba Markab Oo Isku Dhacay